Zenhliziyo - kuyinto okhethekile wezokwelapha ethandwa kakhulu. Iqiniso ukuthi zokugula we esimiso senhliziyo nemithambo yegazi yande kakhulu emhlabeni namuhla.
Zenhliziyo - a Udokotela othile osebenzelana sitholakele, ukwelashwa kanye nokuvinjelwa kwezifo of the system senhliziyo nemithambo yegazi. nzima ukuthola okufanayo efunwa ngabakwa okhethekile wezokwelapha. Lokhu kungenxa yokuthi ngeminyaka, cishe njalo ekuthuthukiseni isifo senhliziyo. Okwamanje, lesi sifo ezivamile.
Abantu abaningi nokufa kwenzeka kudalwa ukwephulwa yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi. Uma isiguli kuhlelelwe ukwelashwa okunengqondo, izinga layo kanye bungakanani ubude bokuphila inyuka kakhulu. It uyakwazi nika owelapha, wenhliziyo futhi udokotela. Yiqiniso, lokho wenhliziyo kuyinto onguchwepheshe zokugula sephrofayela senhliziyo. Lokho-ke uyakwazi nika eziphelele kakhulu okunengqondo esimweni ngasinye ekwelapheni izifo zenhliziyo. Kungenxa yalesi sizathu, abelaphi futhi zifunda jikelele ithunyelwa ezifanele Uchwepheshe izeluleko ezigulini zazo.
Lapho nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo ukusebenza?
Lokhu udokotela, nakuba kubhekwa onguchwepheshe, kungatholakala cishe yimuphi umtholampilo. Ngokwemvelo, lokhu kusho nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo elitheni bafeze imisebenzi yabo ezibhedlela ezikhethekile ukuthi aphathe kahle kwezinso ngokwanele sina futhi ezinzima inhliziyo. Lezi Aces umsebenzi umsebenzi e-Institute of nezenhliziyo. Lapho, bengakwenzi kodwa futhi imisebenzi yocwaningo kuphela yezokwelapha, ekuthuthukiseni izindlela ezintsha uphethwe, ukwelashwa kanye nokuvinjelwa kwezifo zenhliziyo. In izikhungo zezempilo zomphakathi wenhliziyo khulula uyosinika konke ngosizo oludingekayo uma okukhulunywa ngumuntu GP.
Ngo ezinkulu umtholampilo ezingane izingane ahlelwe wokubonisana e onguchwepheshe inikezwe. Iziguli kulencane zihlale ukukusiza wenhliziyo ezingane. Uphenyo umsebenzi lezi zazi zinhle kakhulu, ngakho ngesikhathi izinsolo kancane isifo senhliziyo ezinganeni, kungcono ukuyikhulumela.
Ezimweni ezimbi kakhulu, udokotela emtholampilo ezingane ngeke isikhathi eside ekhaya azokuqhubela nesineke kancane. Izingane ezinjalo bavame ukuthunyelwa ezikhungweni Institute of nezenhliziyo, lapho benza khona izazi abanolwazi kakhulu uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi.
Okwafezwa nezenhliziyo yesimanje
Kuze kube manje, wenhliziyo - onguchwepheshe ihlonishwe. Ububanzi bemisebenzi yayo ubanzi kakhulu, ngoba esimiso senhliziyo nemithambo yegazi enkulu yomzimba womuntu. Ngenxa yentuthuko kwezokuhlolwa kwezinkanyezi yesimanje nezenhliziyo Iningi kweziguli zokugula, okuyinto kubhekwa ebulalayo emashumini ambalwa eminyaka edlule, siphila ngempela kahle.
Langaphambilini isilethikusebenza kwakunzima kakhulu ukubhekana nakho. Inani labantu ababulawa ngemva kwaba omkhulu. Okwamanje, le zokugula futhi esiyingozi ngokwedlulele, kodwa imithi emtholampilo oye wakwazi ukufeza basinde izinga okukhulu kunangaphambili. Ngenxa yalesi simo yokuthi yesimanje ukuphathwa lwemithi akhiwa nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo, kuyinto nemiphumela engcono kunokuthi labo abeza ngaphambili.
Ngisho nasezimweni ezikhululekile kungenzeka yamuva esedlule, arrhythmia, sina ngokukhethekile ezahlukeneyo zawo zazilotshiwe isifo cishe ebulalayo. Namuhla kunjalo futhi kakhulu ona izinga lokuphila iziguli, kodwa manje kukhona Inani labantu ababulawa amashumi kancane izikhathi. Lokhu kungenxa ukuthuthukiswa ngempumelelo beta-blocker (isib izidakamizwa "Carvedilol"), kanye nokusetshenziswa kahle ka glycosides inhliziyo (elisho ukuthi "Digoxin"). Ngiphephile okwandile ekulweni arrhythmia atholwe izidakamizwa "Amiodarone". Ekuqaleni, iqondiswa efomini umjovo ke isiguli udluliselwa ithebhulethi. Ngokuvamile, ngenxa ke uphatha ukumisa uhlobo enjalo ngokuba yingozi kwezinkolelo-arrhythmia kuyinto fibrillation atrial.
Mayelana wenhliziyo bodumo
Phakathi odokotela yalesi okukhethekile kukhona inkanyiso wangempela imithi. Lezi zinto zihlanganisa wenhliziyo owaziwa Alliluev Iosif. Lokhu uchwepheshe Kayisilutho ngaphandle umzukulu uStalin. Wazalwa May 22, 1945. Alliluev Iosif kuyinto umlobi wezincwadi eziningi amaphepha isayensi. Umsebenzi wakhe lishicilelwe eU.SSR eRussia zanamuhla.
Ngezikhathi, ezweni lethu kukhona izingqungquthela ezikhethekile, kubahlanganyeli okuyizinto edume kunazo nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo iplanethi. Lapho, bahlukene phakathi ekuqongeleleni ulwazi, ngakhoke iqhubeke ekuthuthukiseni izinga okhokhelwayo.
Enye wenhliziyo Russian owaziwa Gratsiansky NA Isikhungo Physico-Chemical Medicine, wakhonza yinhloko Laboratory of nezenhliziyo Clinical. Okwamanje Gratsiansky NA wahlanganyela izinkinga kwezimiso acute e nezenhliziyo, kanye ekuthuthukiseni izindlela zokuvimbela. Ngo-2012, yena waba enamathiselwe umlaza ka behlonipha nezenhliziyo we Russian Federation.
Abdullaev A. A. kubuye omunye nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo owaziwa. It is waziphatha izinkinga umthelela dyslipidemia on ukuthuthukisa izifo yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi. Ngemizamo yakhe, ukhetho abayisihlanu okulungiselelwe kanye 1 MD. Ngo-2011, wathola wenhliziyo zokuhlonipha we Russian Federation.
Kunini lapho kufanele ngithinte uthintane wenhliziyo?
Zenhliziyo - onguchwepheshe ehilelekile sitholakele, ukwelashwa kanye nokuvimbela izifo ezithinta uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi. Ngenxa yalokhu xhumana nodokotela kuyadingeka uma kukhona izimpawu of ukuhlulwa kwakhe. Phakathi izici eziyinhloko Kumele kuqashelwe ukubukeka ubuhlungu enhliziyweni, kanye ngemuva breastbone. Kulokhu, lo uphawu liyakhula namandla aso lapho uvivinya umzimba. Lokhu kungenxa yokuthi ukuhamba inhliziyo kudinga nomoya-mpilo omningi, futhi lokho kuyajabulisa ukuntuleka kwayo. Ngesikhathi esifanayo umzimba ophilile lezi zimpawu ngeke unike. Phakathi kwezinye yezinkinga ezihambisana ukulimala inhliziyo, kufanele kuphawulwe ukubukeka iphika nge ukuzikhandla omncane ngokomzimba noma uphumule. Isici esibalulekile nakho kungaba ukuvuvukala wemikhawulo aphansi. Kwenzeka kaningi kakhulu kusihlwa. Engingakusho uphawu esiyingozi Akukhona ukubukeka emizweni ukuphazamiseka umsebenzi inhliziyo. Lokhu kungase kubonise ukuthuthukiswa arrhythmias sina.
Ngisho nangaphambi kokuba kuhambele uchwepheshe, kuyatuseka ukuba kudlule electrocardiography kanye ultrasound inhliziyo. Lokhu uphethwe kwangaphambilini kuzosiza udokotela ngokushesha kakhulu uzulazule uphethwe futhi ngenxa yalokho, ukuze kubhekiselwe endaweni eyikhaya ukwelashwa okunengqondo. Ngesikhathi esifanayo, uma umuntu ubuhlungu besifuba okokuqala kwembulwa umlingisi abacindezelayo kanye owelapha has nitrate izidakamizwa bamiswe, kubalulekile ukuqeda reception zabo izinsuku 3 ngaphambi kokuba ubonane wenhliziyo.
Okokuqala kubalulekile ukusungula uphethwe. Ukuze uthole ukucaciseleka yayo singadinga ezengeziwe izindlela zokuxilonga, isib, ambulatory blood pressure ukuqapha noma ucwaningo kusetshenziswa indlela Holter. Ngaphezu kwalokho, iningi zezempilo imishini emikhulu etholakalayo veloergometry. Konke lokhu ukuhlola ukuthi kungakanani abakwaziyo basize ekumiseni i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe. Ngemva wenhliziyo eyonquma okuyinto isifo ombangela Ukuwohloka esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, ngeke liqoke Yiqiniso okunengqondo ukwelashwa, kwehlisa amathuba ngenxa yezinkinga kuthuthukisa izinga lesiguli zokuphila. Kodwa imithi emtholampilo zanamuhla ubani oye wagxumela phambili ezindabeni kwemithi. Ngenxa yalokho, wenhliziyo esimisiwe ejenti cishe njalo ukusiza ukuthuthukisa isimo lesiguli.
Uma kudingekile, udokotela anganikeza ukwelashwa hhayi kuphela e-nesineke, kodwa futhi ezimweni umile. Kuyadingeka uma isifo senhliziyo ifinyelele ngamaphi amazwi aphawulekayo futhi zisongela ukuphila kwesiguli. ukuphathwa elimile ngokuvamile ubabonisa phezu izinsuku 7-10. Lapho khona zokushaywa inhliziyo le nkathi kungase kwandise pheze ngesiquntu.
I zokugula ezivamile
Ezimweni eziningi, le wenhliziyo kufanele abhekane hhayi infarctions, futhi ezifana izifo evamile ezifana, isibonelo, umfutho wegazi ophakeme. Abaphethwe lesi sifo cishe ingxenye yesine ka inani labantu emhlabeni. I wenhliziyo uyakwazi ukusetha degree sokuthuthuka, futhi eminye wehlise umfutho wegazi ngenxa izibalo. share sengonyama lezifo okwakudingeka alwisane nabo abakhona onekhono libhekisela eqenjini ischemic isifo senhliziyo. Lokhu kuhlanganisa i-angina, nazo zonke izinhlobo zezinsimbi cardio (atherosclerotic, esivimba amanzi).
Abayiziqumama Young emhlabeni. Billionaires izwe: uhlu